Tom Hiddleston – Cast – Channel Myanmar
Thor (2011) MCU
War Horse(2011) War Horse(2011) IMDb....7.2,,,Rotten...76% အခုတင်ပေးမှာကတော့ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်အကြား ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မိသားစုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စစ်၏သဘောတရား စတဲ့ ခံစားမှုရသမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ အပေါ်ကအတိုင်း War Horse ပါ.. .စစ်မြင်းတစ်ကောင်အကြောင်းပေါ့... Jurassic Park, Jaws စတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဦးစားပေးဇာတ်ကားတွေ၊ Saving Private Ryan၊ Schindler’s List၊ စတဲ့ စစ်ပွဲဦးစားပေးဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်... စာရေးဆရာကြီး Michael Morpurgo ရဲ့ နာမည်ကျော် War Horse စာအုပ်ကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း နိုင်ငံအသီးသီးက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြင်းပေါင်း ရှစ်သန်းကျော်ရဲ့ သနားစရာဘဝကို တစ်ကောင်တည်းနဲ့ ကိုယ်စားပြု ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်...ပြီးတော့ Loki မင်းသား Tom Hiddleston နဲ့ Sherlock Holmes မင်းသား Benedict Cumberbatch တို့ကလည်း အားဖြည့်ကူညီထားပါတယ်.... ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ပထမကမ္ဘာစစ်မစမီ ...
IMDB: 7.2/10 133,894 votes
Midnight in Paris (2011) City oF Lightလို့ သမုတ်ကြတဲ့ ပါရီ ပဲရစ်မြို့အကြောင်း.... အဲ့ဒီမြို့ကလေးက ယွင်းယိုပျက်စီးခြင်းမရှိသေးတဲ့ အတိတ်တွေအကြောင်း...အဲ့ဒီမြို့ကလေးက စာရေးဆရာ၊ပန်းချီဆရာ အနုပညာသည်တွေအကြောင်း အဲ့ဒီမြို့ကလေးက ရွေးချယ်မှုတွေအကြောင်း ပြောပြချင်တယ်.... ။ အဲ့ဒီမြို့ကလေးဟာ အောက်ဆုံးဘဝမှာတောင် အပျော်ဆုံးဘဝတစ်ခုတည်နိုင်လေမဲ့ နိဗ္ဗာန်ငယ်လေးတစ်ခု.. နေခြည်အောက်မှာပဲတည်တည် မိုးမှုန်အောက်မှာပဲတည်တည် အဲ့ဒီမြို့ကလေးရဲ့ အလင်းဟာ စကြဝဋ္ဌာထဲ အထင်ရှာဆုံးလို့ ဆိုကြတယ်။ ဘာရယ်ကြောင့် ပဲရစ်ဟာ အနုပညာဆန်စွာခမ်းနားနေတာလဲဆိုရင် ပဲရစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာတွေကြောင့်လို့ ဖြေမဲ့လူအတော်များလောက်မယ်။ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး ပေါဂေါ်ဂင် အားနက်စ်ဟဲမင်းဝေး ပက်ဘလိုပီကာဆို အစရှိသဖြင့် မှတ်ကျောက်အထင်ဆုံးအနုပညာသည်တွေဟာ ဒီမြို့မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးအနုပညာပစ္စည်းတွေကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တာလို အရာတွေကြောင့်လို့ ထင်ရင်ထင်လောက်စရာပါပဲ။ ပသို့ပဲထင်ထင်.. ပဲရစ်ဟာ သူ့ချည်းသက်သက်မှာလည်း လမ်းတိုင်း အဆောက်အဦးတ်ိုင်း လမ်းမကျယ်ကြီးတိုင်းက အနုပညာဆန်လွန်းနေပါတယ်။ " နေ့ရက်၊ အချိန်အခါ၊ နေရာ၊ အဆောက်အဦး အရာဝတ္ထုတို့ဟာ အမှတ်တရတို့ကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့" တာရာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာအက်ဆေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီ ရုပ်ရှင်မှာတော့...အချိန်အခါ နေရာ အဆောက်အဦးတို့မှာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ မသေဆုံးတတ်တဲ့ အတိတ်အမှတ်တရတို့ကို ချစ်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ သူ့ရွေးချယ်မှုတို့အကြောင်း သူ့အနုပညာအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားကြရမှာပါ။ IMDb Rating - 7.7/10 ရရှိထားပါတယ်။ (အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ WiRa Aung ဖြစ်ပါတယ်) File size__( 860 MB) and ( ...
IMDB: 7.7/10 349,394 votes
High-Rise (2015) "စကြဝဠာနဲ့ လူတွေရဲ့ ရူးသွပ်မှုသာ အဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်။ အရှေ့ကတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် မသေချာဘူး" လို့ ၂၀ ရာစုရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်လို့ သမုဒ်ခံထားရတဲ့ Albert Einstein ကပြောခဲ့ပါတယ်။ လောဘကြောင့် ဒေါသကြောင့့် မောဟကြောင့် လူတွေ ရူးသွပ်နေကြပါတယ်။ Thor ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ Loki အဖြစ်တွေ့ရတဲ့ Tom Hiddleton ကို High Rise (2015) မှာတော့ သူ့ရဲ့ရူးသွပ်မှုကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ခံယူလိုက်တဲ့ Dr. Laing အဖြစ်တွေ့ရမှာပါ။ Tom ရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကို ဒီဇာတ်ကားမှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်မှာပါ။ ဆိုးဆိုးရွားရွား ရူးသွပ်သူတွေကြားမှာ ပုံမှန်ရူးသွပ်သူက ဆိုးရွားသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်တာကို Dracula:Untold မင်းသား Luke Evans က Richard Wilder နေရာကနေသရုပ်ဆောင်ပြသွားပါတယ်။ Free will ဆိုတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်ထားမှာ သန့်ရှင်းမှု တရားမျှတမှု ကောင်းမှု မကောင်းမှုတွေ ဆိုတာရှိဖို့မလိုပါဘူးဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပြပေးထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်ထားရှိသူတွေကို အာဏာရှင်တစ်ယောက်က မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာရောပေါ့။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Laing တစ်ယောက် အထပ်မြင့်တိုက်မှာသွားနေပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ကြတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကနေ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ထားတာပါ။ သွေးထွက်သံယိုခန်းနဲ့ sexခန်း ...
IMDB: 5.6/10 32,107 votes
I Saw the Light(2015) I Saw the Light(2015) အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့... မင်းသားကြီး Loki ခေါ် Tom Hiddleston နဲ့ မမ Scarlet ခေါ် မင်းသမီး Elizabeth Olsen တို့ရဲ့ကားလေးပါ... ဒီဇာတ်ကားဟာ country သီချင်းတွေဆိုတဲ့အဆိုတော်ကြီး Hank William ဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်... အဆိုတော်ကြီး Hank William ဘ၀အကြောင်းကို ရိုက်ထားလေတော့ Tom Hiddleston လည်း တော်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်..သူဟာ ဒီဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ဖို့အတွက် ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ အသက်ပါတဲ့ ဂစ်တာတီးဟန်ဖြစ်ဖို့ အရေး အချိန်များစွာပေးပြီး ဂစ်တာတီးလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်... ပြီးတော့ country သီချင်းဆိုဖို့ အတွက်လည်း နာမည်ကြီး country အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သူ Rodney Crowell နဲ့ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ... ဒီဇာတ်ကားထဲက သီချင်းတွေအားလုံးကို သူကိုယ်တိုင်ပဲသီဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်... ကိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားလေးကိုခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Ko Ba Nyar ပဲဖြစ်ပါတယ်... File Size : (900 MB) and (375 MB) Quality ...
IMDB: 5.7/10 5,280 votes
I Saw the Light(2015)
Early Man(2018) အခုတစ်​ခါ​တော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်​ထွက်​ထားတဲ့ Early Man ဆိုတဲ့ ​ကျောက်​​ခေတ်​ကာလကို ​နောက်​ခံထားပြီးရိုက်​ကူးထားတဲ့ Animation ကား​လေးတစ်​ကားကိုတင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ဒီကား​လေးကို ဒါရိုက်​တာ Nick Park ကရိုက်​ကူးခဲ့တာဖြစ်​ပြီး Aardman Animation က ​နေထုတ်​လုပ်​ဖြန့်​ချီထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ ဒီကား​လေးက ​ကျောက်​​ခေတ်​ကာလက​နေ​ကြေး​ခေတ်​​ပြောင်းတဲ့ကာလမှာ ​ကျောက်​​ခေတ်​မှာ ​အေး​ဆေး​နေခြင်​တဲ့ ​ကျောက်​​ခေတ်​လူသား​လေး Dug က သူ့အိမ်​ကို အ​နှောက်​အယှက်​​ပေးဖျက်​ဆီး မယ့်​ လူဆိုးကြီး Nooth ရဲ့ရန်​က​နေကာကွယ်​တာကို ရိုက်​ကူးပြထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ ဇာတ်​ကား​လေးက​တော်​​တော်​ ​ကောင်းပြီး ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ သီချင်း​လေး​တွေကလဲ ​တော်​​တော်​ ​ကောင်းပါတယ်​ ဒီကား​လေးထဲမှာ Dug အဖြစ်​ Eddie Redmayne က သရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီး Goona အဖြစ်​ Maisie Willians နဲ့ လူဆိုးကြီး Lord Noothဖြစ်​ Tom Hiddlestom က အသံသရုပ်​​ဆောင်​​ပေးထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ ကဲ Animation ပရိတ်​သတ်​ကြီးအ​နေနဲ့က​တော့လက်​လွတ်​မခံသင့်​တဲ့ကား​လေး ဆိုတာ​ပြောလိုက်​ပါရ​စေ Qty - 720p Bluray Gern - Animation / Action / Thriller Duration - 1hr 55min Translator ...
Kong: Skull Island Explore the mysterious and dangerous home of the king of the apes asateam of explorers ventures deep inside the treacherous, primordial island. ၁၉၇၃ ကာလ မြင်ကွင်းတွေ နဲ့အတူ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြီးကာ လမှာ Monarch လို့ခေါ်တဲ့ လျှို့ ဝှက် အဖွဲ့အစည်းအတစ်ခုဟာ မြူခိုးတွေနဲ့ အုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ အရိုးစု ကျွန်းဆိုတဲ့ ကျွန်းသစ်တစ်ကျွန်း ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျွန်း ပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်မျိုး စိတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက် သုတေ သနပြုဖို့ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီကျွန်း ပေါ်မှာ ကောင်ဆိုတဲ့ ဧရာမ မျောက်ဝံကြီးရှိသလို အခြားထူး ဆန်းတဲ့ သတ္တဝါပေါင်းများစွာ လည်း ရှိနေတာပါ။ ...
IMDB: 6.8/10 120,209 votes